Iimfuneko zokutshata eNorway | Ukuhamba kwe-Absolut
Ngenxa yezizathu ezininzi ezahlukileyo, zininzi izibini ezifuna njalo ukutshata eNorway. Sithetha ngezibini ezifuna ukuqala ubomi obutsha kunye kwilizwe laseScandinavia okanye abo sele behlala apho kwaye bagqiba ekubeni benze imeko yabo ngokusesikweni. Kukwakho nemeko yezibini ezithandanayo ezivela kwamanye amazwe abaphupha ngomtshato kwindawo eyahlukileyo, entle nenomdla: umhlaba weefjords.
Bonke baya kuba nomdla kakhulu kulwazi esizisa kulo namhlanje. Siza kuyiphonononga Imiba yezomthetho neyolawulo Kufuneka utshatile eNorway kunye nezinye ze izithethe kunye nokusetyenziswa inxulunyaniswa nalo msitho. Konke ngenjongo yokuba yonke into ihambe kakuhle ngale mini yolonwabo.
1 Imfuno zomthetho
1.1 Umtshato ongathath'icala
2 Ukutshata eNorway: izithethe kunye namasiko
2.1 Iimpahla kunye neelokhwe
2.3 Izithethe zomtshato
Amaqabane anqwenela ukutshata kummandla waseNorway kufuneka agqibe ezi nkqubo zilandelayo:
Bala zombini iipassports ngamandla kwaye unayo iziqinisekiso zokuzalwa iyasebenza.
Nikela nge ilayisenisi yomtshato evela kwilizwe lokuzalwa (isatifikethi sobume obungatshatanga okanye, ukuba kufanelekile, uqhawulo-mtshato okanye ukusweleka kweqabane kwimeko yabahlolokazi nabahlolo) ukuqinisekisa ukuba akukho zithintelo ekubhiyozeleni umtshato.
Nxibelelana ne inkundla yommandla ohambelana nendawo apho ikhonkco liya kubanjelwa khona ukuze ufumane i isigunyaziso somtshato esikhutshwe ngabasemagunyeni. Le nkqubo ithatha malunga neeveki ezimbini, ukuba akukho meko zingaqhelekanga. Ukufumana esi sigunyaziso kuya kufuneka uhlawule imali encinci.
Kuqhelekile ukuba abantu abafuna ukutshata eNorway abekho kweli lizwe ukwenza zonke ezi nkqubo. Kananjalo abanayo inombolo yokuchonga yobuNorway. Kule meko, kuya kufuneka uqale uye kwi KwiOfisi yoBhaliso yeSizwe (I-Sentralkontor yolungelelwaniso lwabantu, ngesiNorway) ikomkhulu labo likomkhulu lelizwe, Oslo. Le yiwebhusayithi yabo esemthethweni: skatteetaten.no.
Iinkqubo zemisitho yomtshato woluntu eNorway zenziwa ngummeli olungisa izivumelwano. Kwimeko yabemi bamanye amazwe, eyona ndlela ibhetyebhetye kwaye ekhululekile yokwenza zonke iinkqubo zolawulo kukunxibelelana kuqala nomzi wommeli waseNorway kwilizwe lokuhlala kwesi sibini.
INorway lelinye lawona mazwe akhululekileyo kwaye avulekileyo emhlabeni. Sele ikho ngoJanuwari 2009, yaguqula umthetho kwimitshato ukuyilungelelanisa neemfuno zentlalo ezazifuna ukwamkelwa ngokusemthethweni kwazo zonke iintlobo zezibini.
Ukusukela ngoko, ngenxa yotshintsho emtshatweni Isini esingathath'icala. Ngamanye amagama, amaxwebhu ayimfuneko ukutshata ayafana, nokuba yeyabantu besini esinye okanye esahlukileyo.
Ukutshata eNorway: izithethe kunye namasiko
Ngaphandle kwenkqubo yomthetho enzima kunye neyoyikisayo, kunomdla ukwazi ezinye zezakudala izithethe namasiko emitshato kweli lizwe. Inokuba ngumbono olungileyo ukubabandakanya kumsitho wabo bafuna ukutshata eNorway. Ezi zezinye zezona zidumileyo:
Iimpahla kunye neelokhwe
Isiko linyanzelisa ukuba abatshakazi baseNorway banxibe iinwele zabo kwaye banxibe entloko isithsaba segolide okanye isilivere Ukusuka kuyo iisongo ezincinci ezime okwe-dangle.
Ngokubhekisele kumyeni nomyeni, isinxibo sodidi oluqhelekileyo ngu isuti yoboya eyenziwe ngesandlaokanye, ebizwa iinyanda. Le lokhwe yemveli inehempe emhlophe, ivesti, idyasi, ibhulukhwe emfutshane kunye neekawusi ezifika emadolweni. Isinxibo esiqhelekileyo, kodwa ayingabo bonke abantu baseNorway abanxiba ngoluhlobo ngemini yabo yomtshato kwaye bakhetha izinxibo eziqhelekileyo.
Ukuhamba kwesi sibini kwindawo yomsitho, okanye ukungena kwabo kwindawo yesidlo, sikhatshwa sisandi sendabuko Iivayolini zeHardanger, Esona sixhobo sithandekayo Umculo wabantu baseNorway.
Ingoma yomculo eyenziwa phantse kuwo wonke umtshato ngumculo obizwa ngokuba Yiza emtshatweni, inani elilinganayo laseNorway lomtshato wamandulo.
Ngaphandle kokuhamba kweminyaka, kukho uthotho lwezithethe ezihlonelwayo nanamhlanje xa kuziwa ekutshatweni eNorway. Nangona imitshato kweli lizwe ngokubanzi isondelelene kwaye kuphela usapho olusondeleyo kunye nabahlobo bamenyiwe, isiko lesi Phosa iinkozo zerhasi kunye nerhasi kwizibini ezisandul 'ukutshata. Okukhona amaqhakuva enokubamba intombazana, liya kuba liqaqambile ikamva lesibini.
Sele kuxolo lwasekhaya, esi sibini kufuneka senze uthotho lwamasiko abizelwe ukubeka isiseko somtshato omde nolonwabileyo. Umzekelo, ngosuku olulandelayo emva komtshato mzantsiwap okanye "isipho sakusasa." Ngokubanzi, ilitye eligugu apho umyeni esonwabisa khona intanda
Kukwalisiko ukuba izibini ezisandul 'ukutshata zityale kunye umphumo ngapha nangapha kwendlela yakho. ENorway, le mithi kukholelwa ukuba iluphawu lomnqweno wesibini sokuqala usapho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iimfuneko zokutshata eNorway
Molo, ndivela eMexico kwaye ndingutata wabantwana be-3, ndifuna ukufuduka ndiye kusebenza eNorway nabantwana bam kwaye ndamkele ubuzwe baseNorway.
Molweni, singabantu abambalwa, sinekhadi lokuhlala ixesha elide kwaye umfazi wam okhulelweyo unenyanga eziyi-8, ndikhumbula inyanga enye kuphela ukuhambisa kwaye ngoku siseNorway ukuba umntwana wazalelwa eNorway, singathini senze amaphepha abantwana eNorwey kwaye sizenzele nathi
uNelson iguago sitsho
Molo, ndivela njani e-Ecuador?
Phendula u-nelson iguago
Anik shaikh sitsho
wena anik vevo espna barcelona trjata lagra ixesha uneminyaka engama-24 usulungekile umsebenzi we-bouno we-vevir ndize nosapho lwam…. Ukucinga ngokuya eNorway ukuya kusebenza
Phendula u-anik shaikh
Molo, ndinemvume yokuhlala ngokusisigxina eSpain. Isithandwa sam sivela eNorway, sitshatile. Ndisicela phi isiqinisekiso sam? Ngaba kufuneka iguqulelwe kwisiNorway? Ukuba kunjalo, ndingayenza phi le nkqubo?
olga toro sitsho
NDINGATHANDA UKUYA ENORWAY NDINENTOMBI YENTOMBI NDINQWENELA UKUBA ANGABANE IKAMVA KWELI LIZWE NJENGAM SIKWAKHO SIYAVELAZUELA SILINDE ILIZWE LETHU LITSHINTSHE KODWA AKUKHO NTO, NDINGENZA NTONI UKUYA KHONA
Phendula u-olga toro
UVeronica cottiz sitsho
Molo, ndinguColombia kwaye ndingathanda ukwazi ukuba zeziphi iimfuno ekufuneka ndihlangabezane nazo ukuze ndihlale ndisebenze eNorway, nomyeni wam kunye nentombi yam eneminyaka eyi-15.
Phendula uVeronica Cottiz
Molo, ndinguCuba kwaye ndilapha eNorway ngokudibana kwakhona kosapho, ndinemvume yokuhlala iminyaka emi-3 ... isoka lam liNorway kwaye sinentombazana eneminyaka emibini kwaye ngoku sifuna ukutshata kodwa asazi ukuba loluphi uxwebhu esilifunayo
Ndivela eCuba kwaye isithandwa sam siyiNorway ndingatshata eNorway
Isiselo saseColombia, ibranti
Iresiphi kaPuto, yenye yeepasta ezimnandi zasePhilippines